Bile Qabowasade oo 6-bilood kadib xoriyadiisii helay maanta. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Bile Qabowasade oo 6-bilood kadib xoriyadiisii helay maanta.
Bile Qabowasade oo 6-bilood kadib xoriyadiisii helay maanta.
Posted: Abdirizak Shiino - September 22, 2012
Bile wuxuu ku xiraan 6 bilood xabsiga boosaaso mana jirin Maxkamad ku riday xukun.
Boosaaso (HM) Siyaasi/ Weriye Bile Qabowsade ayaa dib u helay maanta xoriyadiisii kadib markii uu mudo ka badan 6 bilood ku xirnaa xabsiga dhexe ee Degmadda Boosaaso isagoo aan wax denbi ah ku helin Maxkamadi.
Wuxuu u sheegay warbaahinta inuu ku faraxsan yahay soo dayntiisa isagoo xusay in uu aaminsanaa markii hore in la sii deyn lahaa maalin uun oo uusan ku waareen xabsiga.
Xariga Bile Qabowsade.
17 April, 2012 saacadu markay ahayd 1 habeenimo saq dhexe waxaa lagala baxay gurigiisa oo ku yaala Magaaladda Boosaso hawlgalkaas waxaa fuliyey 4 Askari oo hubaysan & 1 qof oo dharcad ahaa waxayna wateen Gaari nooca loo yaqaano MARKT kuma aysan wargelin wax sabab ah mana wadan warqad Maxkamadeed iyadoo isla habeenimadii guure lagu geeyey Saldhiga Booliska duhurnimadiina loo dhaadhiciyey Xabsiga dhexe ee Magaalaadda loomana ogolaan in ay arkaan Qoyskiisa & Asxaabtiisa toona maalintaas sida ay noo xaqiijisay Faadumo Cali Maxamed oo ah xaaska Bile Qabowsade oo wakhtigaas kula sugnayd guriga.
Sababta lagu xiray.
Wax war ah kama soo saarin Xukuumadu xarigiisa mar aan ka samaynay warbixin waxaan isku daynay in aan xiriir la samayno Saraakiil ka tirsan Booliska, Wasaaradda Amniga & Laamaha Garsoorka hase ahaatee dhamaantoos waxay uga gaabsadeen si isku mid ah taas oo sheki gelinaysa sababta rasmiga ah & cida bixisay Amarka lagu soo qabtay.
Sida dadka intooda badani aaminsanyihiin sababta Bile loo xiray waxay la xiriirtaa Waraysiyo uu siiyey Warbaahinta qaar & Hadalo uu ka yiri goobo caam ah kuwaas oo uu ku dhaliilay waxqabadka Xukuumadda talada haysa, Mudo kordhinta Madaxweynaha & qaabka ay u rabtay in loo ansixiyo Dastuurka.
Dadaalka Horseed Media u gashay soo deynta Bile.
Horseed Media waxay u gashay dadaal dheer sidii Xukuumadda Madaxweyne Faroole loogu saari lahaa cadaadis soo deynta Bile, 27, July, HM waxay isku duba riday warbixin dheer taas oo cinwaan looga dhigay (Bile Qaboowsade ma heli doonaa xaquuqdiisa Dastuuriga ah?) warbixintaas oo lagu soo bandhigay xogo badan oo aan horay loo hayn.
13 Aug, Horseed Media waxay isu keentay 4 Siyaasi oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay Puntland kuwaas oo si isku mid ah u dhaleceeyey talaabada Xukuumadu ku xirtay Bile uguna baaqay inay si deg deg ah u sii dayso.
Halkan ka Dhegayso codadka Siyaasiyiintaas.
Xukuumad Madaxweyne Dr. Faroole waxaa looga bartay caburin, xarig & cago juglayn ay la beegsato qof walba oo dhaliila Waxqabadkeeda & qaabka ay u shaqaynayso talaabadaas oo ay ku lumisay taageerayaal badan si weyna loogu dhaleeceeyo.
Hada waxay ku dhawaaqday Xukuumadu inay dalka u horseedi doonto nidaamka Asxaabta badan waloow dad badani is weydiinayaan sida ay isula jaan qaadi karaan arrimahaasi.